Umatshini wokupholisa umoya webhasi, umqeqeshi, ibhasi yesikolo kunye nomzi mveliso webhasi kunye nabenzi | SONGZ
Isivavanyi soMoya ngebhasi, umqeqeshi, ibhasi yesikolo kunye nebhasi echaziweyo
I-SZR Series, i-Mid-To-High-End Bus, ye-8.5-12.9m yeBhasi, iTyhusi yeBhola yeAluminiyam yokuGqitywa.
I-SZR-IIIF-D kunye ne-SZR-III-D
I-SZR-VI-D kunye ne-SZR-VIF-D
I-SZR-IV kunye ne-SZR-IVF-D kunye ne-SZR-VD
Uchungechunge lwe-SZR luhlobo lophahla oluphezulu lweyunithi yomoya ye-8.5m ukuya kwi-12.9m ukusuka phakathi ukuya esiphelweni sebhasi eqhelekileyo, umqeqeshi, ibhasi yesikolo okanye ibhasi echaziweyo. Umthamo wokupholisa uthotho lwesixhobo sokupholisa ibhasi sisusela kwi-20kW ukuya kuma-40kW, (62840 ukuya 136480 Btu / h okanye ngo-17200 ukuya ku-34400 Kcal / h). Ngokubhekisa kwisibulali-moya seminibhasi okanye ibhasi engaphantsi kwe-8.5m, nceda ujonge kuthotho lwe-SZG. Okanye unganxibelelana nathi ku sales@shsongz.cn ngeenkcukacha ezithe kratya.
Ukucaciswa kobuchwephesha beeBhasi A / C SZR Series:
22 kW okanye
24 kW okanye
28 kW okanye
30 kW okanye
26 kW okanye
33 kW okanye
Isebenza kwimozulu yase China）
31 kW okanye
37 kW okanye
34 kW okanye
36 kW okanye
40 kW okanye
Ubukhulu: 4280x1860x188 (mm)
Ulwazi lwezoBuchule be-SZR-IIF-D Ulwazi lwezoBuchule be-SZR-III-D Ulwazi lwezoBuchule be-SZR-IV-D
Ulwazi lwezoBugcisa be-SZR-IVF-D Ulwazi lwezoBugcisa be-SZR-VD I-SZR-VF-D Ulwazi loBugcisa
I-SZR-VI-D Ulwazi loBugcisa Ulwazi lwezoLwazi lweSZR-VIF-D
Imvelaphi ye-RZ & R yangasemva:
I-SZR yee-air conditioners ziveliswa ukuhlangabezana neemfuno ezandayo zokubonakala kwemeko yomoya webhasi kwishishini lebhasi. Ukufezekisa umgangatho wokubonakala okuhle, i-SZR yee-air conditioners zisebenzisa indibaniselwano yesimbozo se-SMC kunye ne-aluminium alloy.
Isombulula ngokufanelekileyo ingxaki yokungabonakali kakuhle kweglasi yefayibha eyipeyinti ngesandla eqiniswe ngophahla lweplastikhi yenkqubo yomoya webhasi. Kwangelo xesha, inolwazi olunzulu lwenkqubo kunye nolwakhiwo, ithathela ingqalelo imeko yophuhliso lobuchule obuphezulu kunye nobunzima bokukhanya.
Ukwazisa ubuGcisa obunenkcukacha kwi-SZR Series ye-air Conditioner
1. Isiciko se-AC: tUgquma usebenzisa indlela ye-SMC kunye ne-aluminium alloy.
Xa kuthelekiswa nesigqubuthelo esingaphezulu esenziwe ngesandla se-FRP, umgangatho wokubonakala uphuculwe kakhulu, umndilili wokuphuma kwemihla ngemihla kuyandiswa kakhulu. Isebenza kwizithuthi zikawonke-wonke nezikwinqanaba eliphezulu kunye neebhasi zabakhenkethi.
Nceda ujike kwi-SUPPRT-FAQ, ukuze wazi okungakumbi ngumahluko phakathi kwe-SMC kunye nesembozo seglasi yefayibha.
2. Inkangeleko ye-AC: Ubhitye kwaye hlela imilo
Inkangeleko ye-SZR yochungechunge lwebhasi ye-AC ilungelelaniswe, ngenkangeleko entle kunye noyilo olucekeceke. Ubunzima be-air conditioner yi-188mm, ephantsi kunobunzima bezinto eziqhelekileyo zomoya.
Ubuncinci bobukhulu be-188mm
Ulwakhiwo lwe-AC: Isakhiwo esilula
Isiseko se-condenser samkela isakhelo esimilise i-V ngaphandle kwesakhiwo seqokobhe elisezantsi, umqadi wecala ulula kwaye ulungiselelwe, kwaye indibano yomoya we-evaporator indibano yamkela iqokobhe elitsha elisezantsi elidityanisiweyo lokugoba. Ngezi ndlela zilapha ngasentla, ubunzima bomoya opholileyo buyancipha kakhulu.
Ulwakhiwo lweBheam engasindi
Ulwakhiwo lwe-AC: Inkonzo kunye noLondolozo oluLungileyo
Isigqubuthelo esiphezulu se-SZR ye-air conditioner yamkela isakhiwo soqhagamshelo, kwaye ipleyiti yesembozo ayifuni ukuba isuswe xa kulayishwa isithuthi, esigcina ixesha lokufaka. Ifeni yokujiya ifakelwe phezulu, kwaye isiciko asifuneki ukuba sivulwe xa ifeni evuthelayo itshintshiwe, kwaye umphunga okhulayo ugcinwa ngexesha lolondolozo. Kwangaxeshanye, kufuneka kuphela ukuba uvule inxenye yeqweqwe elisecaleni, ekulula ukuyilungisa emva kwentengiso.
Isakhiwo sehenjisi se-Evaporator
Umqhubi we-condenser kunye nesakhiwo sehenjisi
5. Ukusebenza kwe-AC: Ukuhambisa okuphezulu kokusebenza kakuhle
I-SZR uthotho lwee-air conditioners ziyilelwe ngokwendlela ye-bus air conditioner condensers, edityaniswa ne-CFD yokulinganisa kwaye isekwe kwiziphumo zohlalutyo, ukwandisa ulungelelwaniso lwe-condenser, kunye nokwamkela uyilo olulungiselelwe ukuhamba okungalinganiyo ukufezekisa okuphezulu ukusebenza kakuhle kobushushu umzimba Exchange.
Uhlalutyo lweCFD lwesantya somoya sokutshintsha umzimba
Ukusebenza kwe-AC: Uyilo olulodwa lwesikhokelo somoya
I-SZR yochungechunge lwe-condenser yomoya webhasi yenzelwe i-condenser fan isikhokelo somoya. Isikhokelo somoya sisebenzisa umgaqo wokujikeleza kweArchimedes kunye noyilo lwesetyhula yokwandisa umbutho wokuhamba komoya kunye nokuphelisa ubushushu obuqhelekileyo ngaphandle kwesikhokelo somoya. Ingxaki yokubuya komoya iphucula kakhulu isiphumo sokutshintshiselana ngobushushu kwesixhobo sokungenisa umoya.
Umdaka we fan okhawulezayo okhethekileyo
Ngohlalutyo lokulinganisa kunye nokuvavanywa kokuvavanywa, umbutho wokuhamba komoya unengqiqo ngakumbi xa kufakwa isiphikisi somoya. Ngaphandle kwengubo. Ukuhamba komoya kuphuma kusasazekile, kwaye ukubuyela umva kwezinto kuyabonakala.
Uhlalutyo lokuhamba komoya ngaphandle komoya kunye nokuhamba komoya nge-hood yomoya
7. Ukusebenza kwe-AC: Ubungakanani bokutshaja kwefriji
Xa kuthelekiswa ne air conditioner ibhasi yemveli, SZR series isebenzisa uyilo umzimba sokutshintsha kunye noyilo olulungiselelwe izincedisi imibhobho lwangaphakathi. Ukunciphisa intlawulo yefriji ngama-30%. Ngokwenjenje ukunciphisa ifuthe lokuvuza kwefriji kwindalo esingqongileyo.
Egqithileyo Isixhobo soMoya kwiMini nakwiMidi yeSixeko ngeBhasi okanye kwiBhasi yabakhenkethi
Okulandelayo: Uqoqosho lweMeko yoMoya kwiBhasi, umqeqeshi, iSikolo seBhasi kunye neBhasi ecacisiweyo